बाबु-छोरा पाइलट, आमा एयरहोस्टेज ! मृ’त्युको मुखमा पुगेर बाँचेको त्यो घ’टना – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/बाबु-छोरा पाइलट, आमा एयरहोस्टेज ! मृ’त्युको मुखमा पुगेर बाँचेको त्यो घ’टना
5567minutes read
अभिभावकको इच्छा विपरित पाइलटका रूपमा उनले जहाज उडाउन थालेको पनि १२ वर्ष बितिसकेको छ । उनी अहिले नेपाल वायुसेवा निगमको पाइलट हुन् । यति मात्र होइन अपरेसन म्यानेजरका रूपमा निगमको नेतृत्व तहको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्दै छन् । उनी हुन् दीपु जुहार्चन । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल थिच्नुहोस्***
आमा सुमिली भने धरानकी हुन् । लामो समयदेखि हस्पिटालिटी क्षेत्रमा कार्यरत उनी पनि पछि एयर होस्टेस भएर नेपाल वायुसेवा निगममा प्रवेश गरिन् । अर्थात यामप्रसाद निगममा पाइलट भए, सुमिली एयर होस्टेस भइन् । कहिले यामप्रसादले उडाएको जहाजमा सुमिली एयर होस्टेस हुन्थिन्, कहिले सुमिलीको ड्युटी परेको जहाज उडाउने पालो यामप्रसादको पर्थ्याे । मन न हो, एउटै संस्था (निगम) र उडानमा हुने लगातारको भेटले दुवैबीच प्रेम अङ्कुरायो । उनीहरू विवाह बन्धनमा बाँधिए । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल थिच्नुहोस्***
कहिलेकाहीँ विमान दु र्घटनाका समाचार आउँथे र दीपु डराउँथे । आफ्ना बाबु–आमा त्यो जहाजमा रहेनछन् भन्ने जानकारी पाएपछि उनी ढुक्क बन्थे।
कहिलेकाहीँ आमा सुमिली पनि ‘क्याबिन क्रु’ का रुपमा त्यही उडानमा हुन्थिन् । त्यही उडानमा ‘क्रु मेम्बर’ का रुपमा रहेका यामप्रसाद र सुमिलीका साथीहरुले दीपुलाई काखमा राख्थे । आमासँगै काम गरेका निगमका पुराना कर्मचारी भेट हुँदा बाल्यकालको ती यात्रा सम्झाइरहन्छन् ।पढाईमा अब्बल भएर होला, बा–आमा उनलाई डाक्टर बनाउन चाहन्थे । त्यसबेला आर्थिक स्तर राम्रो भएकाहरू मात्र पाइलट पढ्छन् भन्ने सोच हावी थियो । पढेलेखेका व्यक्तिको छनोटमा पाइलट तालिम खासै पर्दैनथ्यो ।
उनी चाहिँ पाइलट नै बन्नुपर्छ भन्ने इच्छा पालेर बसेका थिए । त्यो पनि बाबुजस्तै अमेरिकामै तालिम लिएर पाइलट बन्छु भन्ने निश्चय उनले गरिसकेका थिए । जब उनले सन् २००५ को जुलाईमा प्लस टु को पढाइ सके, त्यसपछि उनी पाइलट कोर्स पुरा गर्न अमेरिका जाने योजना बनाउन थाले । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल थिच्नुहोस्***
छोराको इच्छा विपरित एमबिबिएस पढाउन आमाबाले पनि कर गरेनन् । एक्लो सन्तान उनको मन राख्दिनैप-यो ।तर, त्यही बेला ओसामा विन लादेन नेतृत्वको ‘अलकायदा’ ले ११ सेप्टेम्बर ९२००१० मा अमेरिकाको आर्थिक राजधानीको रुपमा चिनिएको न्यूयोर्कका ट्वीनटावरमा दुई जहाज ठोक्काएर आक्रमण ग¥यो । जसले गर्दा अमेरिकाले भिसा प्रक्रियामा कडाइ ग¥यो ।
हतपति कसैको भिसा नलाग्ने समयमा पनि दीपुले आस मारेनन् । कसैगरी अमेरिका पुगिएन भने बा–आमाको इच्छा अनुसार मेडिकल साइन्स नै पढ्ने उनको इच्छा थियो ।बिहानको समय उनी मेडिकल साइन्सका लागि ‘इन्ट्रान्स’ तयारी कक्षा लिन्थे भने दिउँसो सोह्रखुट्टेस्थित एउटा बालबच्चा हेरचार गर्ने गैरसरकारी संस्थामा काम गर्थे ।
उनको जिम्मेवारी थियो, संस्थामा रहेका बालबच्चालाई लुगा लगाइदिने, खाना खुवाइदिने, खेल खेलाउने । बच्चाहरुसँग त्यहीँ खाना खाएर उनी साँझ मात्र घर फर्कन्थे । त्यहाँ ९ महिना बिताए उनले ।‘प्लस टु’ सिध्याएर ‘ट्रान्स्क्रिप्ट’ आएको पनि पाँच महिना बितिसकेको थियो । सन् २००५ को अन्त्यसम्म पुग्दा अमेरिकी भिसा प्राप्त गर्न केही खुकुलो भयो । तर, पाइहाल्ने पक्का भने थिएन । त्यसैले, ‘ब्याक अप’ का रूपमा थियो मेडिकल तयारी ।तर, अन्त्यमा उनले ‘रिस्क’ लिन चाहे । मेडिकलका किताब थन्काए र अमेरिकाको लागि भिसा प्रोसेस सुरु गरे । सौभाग्य, भिसा लाग्यो । उनी अमेरिका पुगे र १४ महिने तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी फर्किए ।
नेपालमा त्यसबेला पाइलटको अभाव थियो । उड्डयनको बजारमा उनीलगायतका युवा पाइलटहरू ‘हट केक’ जस्तै थिए । निगमले पाइलटका लागि आवेदन माग्यो, उनले परीक्षा दिए । ८र९ महिनामा नतिजा, आन्तरिक तालिम लगायतका सबै प्रक्रिया पुरा गरी निगमको पाइलट नियुक्त भए, सन् २००६ को अक्टोबरमा । र, सन् २००७ मा को—पाइलटको लाइसेन्स पनि पाए । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल थिच्नुहोस्***
बुबासँगको त्यो पहिलो उडानपछि प्लेन पोखरा विमानस्थलमा अवतरण ग¥यो । त्यहाँ आफन्तसँगको आत्मीय भेटघाट उनको मष्तिष्कमा अझै ताजै छ ।त्यसपछि १५ जुन २०१८ ९१ असार २०७५० मा बुबा क्याप्टेन र आफू को पाइलट भएर उडान भर्ने मौका पाए । पछि को—पाइलटका रुपमा आमा–बुबासँगै एउटै जहाजमा रहेर उडान गर्ने मौका पनि पाए उनले ।
जब जहाज त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण ग¥यो, जहाजभित्रै उनको जन्मदिनको केक पनि काटियो । खासमा काममा उनी अति व्यस्त रहने भएकाले पनि दुई दिन अघिको जन्मदिन पनि उनले मनाउन पाएका थिएनन् । र, जहाजभित्रै उनको ‘बर्थ डे’ मनाइएको थियो । अर्थात् बाबुआमासँगै राष्ट्रपति भण्डारीको उडान गरेको दुई दिन अघि उनले ३२ औं वर्षमा प्रवेश गरेका थिए । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल थिच्नुहोस्***
को–पाइलट हुँदाको घटना हो, तुम्लिङटारबाट काठमाडौँ आउँदै थियो त्यो जहाज । आकाशमा तुवाँलो र बादल मिसिएर च्याउ आकारमा बसेको थियो । यस्तो बादलमा पानीको मात्रा बढी हुन्छ, जसले गर्दा त्यसभित्र पुगेमा जहाजलाई धेरै हल्लाउँछ । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल थिच्नुहोस्***
उनले क्याप्टेनसँग ‘बादलभित्र जहाज नछिराऊँ’ भने, उनको कुरा सुनिएन । तर, जब जहाज बादलभित्र छि¥यो, एकैछिनमा जहाज बेस्सरी हल्लिन थाल्यो । क्याप्टेन आफै पनि बेस्सरी आत्तिए । ‘अझ जहाजको सिसामा आएको असिना पानीको आवाजले मान्छे बोलेको समेत नसुनिने अवस्था सिर्जना भयो’ उनले सुनाए, ‘हुन त, जुनियर थिएँ तर मैले च्यालेन्जिङ हिसाबले क्याप्टेनलाई अवतरण गर्न लगाएँ ।’ उनलाई अहिले पनि लाग्छ, आफू चुप लागेर बसेको भए जहाजमा सवार सबैको अन्तिम दिन हुने थियो त्यो ।यस्तै एउटा सम्झनलायक घटना छ उनी क्याप्टेन हुँदाको ।
(कञ्चन न्यौपानेले नयाँ पत्रिका दैनिकमा २०७६ फाल्गुण १० शनिबारका दिन छापिएको यो सामग्री हामीले सिधा कुरा अनलाईनमा साभार गरेका हौ)